Daawo: Deegaano cusub oo ciidamada Puntland kala wareegeen Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
12th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Maamulka ayaa Puntland markale soo bandhigay saldhigyo uu todobaadyadii ugu dambeeyay kala wareegay Ururka AlShabaab ee buuraleyda Galgala kadib hawlgalo ay Ciidamadu ka sameeyen Buuralaydaas.
Saldhigyada ay Ciidamada Puntland kala wareegan Shabaab ayaa kala ah:- Guri-xoor, Dhagax dheer, Guri Dharkeyn, Guri Xiis, Karin Xagarood iyo saldhigii ugu dambeeyey ee Din-digle, waxaana sido kale ay horay Ciidamadu Shabaab uga qabsadeen deegaanka Galgala, xilligasoo saxaafadda deegaankaas loo soo bandhigay.
Taliyaha Ciidamada Difaaca Puntland Gen. Siciid Maxamed Xirsi Siciid Dheere ayaa sheegay in Ciidamada Puntland ay guulo waawayn ka gaareen wajiga labaad ee dagaalka, isla markaana ay hada bilaabeen wajiga saddexaad ee dagaalka ka dhan ah Shabaab.
Gen. Siciid Dheere ayaa sheegay in markasta oo la wiiqo awooda Shabaab ay dib uso hubayn iyo qalabayn ka helaan Maamulada dariska la ah Puntland.
“Wixii aduunku taakulayn bixinayay koonfurta ayay joogaan, Puntland 1992-dii ayuu ka bilowday dagaalka argigixisada ilaa maanta oo ah 2015 dagaalkaas weli wuu ka socdaa Puntland. Muddaas ka badan 20 sano Puntland aduunka wax taageere ah kama aysan helin,waan isku tashanay Alshabaabna dhulkeeda waan ka ciribtiraynaa,” ayuu yiri Siciid Siciid Dheere.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ ayaa dhowaan sheegay in dadweynaha reer Puntland ay u muuqanayan kuwo aan ka wahayn dagaalka ay Puntland kula jirto Shabaab.
Waxaa jira warar sheegaya in ciidamada Puntland garab xoog leh ka heleen ciidamo ka socda dal shisheeye oo aan la magacaabin, kaasoo xitaa duqeymo diyaaradeed, ciidan iyo qalab ku taageeray ciidamada daraawiishta Puntland, taasina u sahashay iney gaaraan degaan aysan weli horay u gaarin.
Deegaanada lagusoo bandhigay dagaalka wajiga labaad ayaa muuqaal ahaan aad uga duwan tuulada Galgala oo lagu soo bandhigay wajiga koowaad, iyadoo tuuladaas iyo deegaanada la xiriira ahaayeen deegaan oomane ah oo lama-degaan ah.
Deegaanada haataan lasoo bandhigay ayaa ah dhul keymo ah oo doog badan, islamarkaana ay ku yaallaan beero ka badan kuwii oo dhir badan kuwii hore.